Analytics uye Kuyedza | Martech Zone
Analytics, kuongorora, kunyevera uye kurovera zvigadzirwa, a / b kuyedza, multivariate kuyedza, kuita kwako, masevhisi uye nhau dzevatengesi pa Martech Zone
Nharembozha Kushambadza Kwadzoka MuVogue - MaBrands Angaite Sei Otomatiki Uye Kuwedzera-Kusimudzira Nharembozha Mishandirapamwe?
Chipiri, January 11, 2022 Chipiri, January 11, 2022 Dimitris Maniatis
Wese munhu anogamuchira ubiquity yenharembozha. Mumisika mizhinji nhasi - kunyanya munyika dzichiri kusimukira - haisiri nyaya yenharembozha yekutanga asi nhare chete. Kune vatengesi, denda rakawedzera kufambisa kuenda kudhijitari panguva imwe chete iyo kugona kunanga vashandisi kuburikidza nevechitatu-bato makuki kuri kubviswa. Izvi zvinoreva kuti yakananga nharembozha dzatonyanya kukosha, kunyangwe mabhureki mazhinji achiri kusungirirana pamwe chete uye akaparadzana.
Sezvo isu takagadzira nekugadzira tsika Shopify theme yechitoro chedu chekupfeka online, taida kuona kuti isu takagadzira inoyevedza uye yakapusa ecommerce saiti isingavhiringe kana kuremedza vatengi vavo. Mumwe muenzaniso wekuyedzwa kwedu kwedhizaini yaive imwe ruzivo block yaive nekuwedzera ruzivo nezve zvigadzirwa. Kana isu tikaburitsa chikamu munzvimbo yekusarudzika, inogona kusundira pasi mutengo uye kuwedzera kubhatani rengoro. Zvisinei, kana
Audiense Insights: Vateereri Segmentation Intelligence uye Analysis Software
China, December 23, 2021 China, December 23, 2021 Douglas Karr
Yakakosha zano uye dambudziko paunenge uchigadzira uye kushambadzira mhando ndiko kunzwisisa kuti musika wako ndiani. Vashambadziri vakuru vanodzivirira muedzo wekufungidzira nekuti isu tinowanzo kurerekera munzira yedu. Anecdotal nyaya kubva kune vemukati vanoita sarudzo vane hukama nemusika wavo kazhinji havaburitse maonero evateereri vedu nekuda kwezvikonzero zvishoma: Iwo akanyanya kurira tarisiro kana vatengi handiwo iwo avhareji kana akanakisa tarisiro kana vatengi. Kunyange zvazvo kambani inogona kuva nayo
Marpipe: Kuisa Vatengesi Nehungwaru Vanoda Kuedza uye Kuwana Anokunda Ad Creative
Chitatu, December 22, 2021 Chitatu, December 22, 2021 Dan Pantelo
Kwemakore, vatengesi nevashambadziri vakatsamira pane vateereri vakananga data kuti vazive kupi uye pamberi paani wekumhanyisa kugadzira kwavo ad. Asi shanduko ichangoburwa kubva kune inoparadza data-migodhi maitiro - mhedzisiro yemitemo mitsva uye inodiwa yekuvanzika yakaiswa neGDPR, CCPA, uye Apple's iOS14 - yakasiya zvikwata zvekushambadzira zvichipokana. Sezvo vashandisi vakawanda uye vachiwedzera kubuda mukutevera, data yekunangisa yevateereri inova shoma uye isingavimbike. Zvigadzirwa zvinotungamira pamusika
Maitiro Ekugadzira Webhusaiti, Ecommerce, Kana Mashandisirwo Emavara Schemes
Chitatu, December 15, 2021 Chitatu, December 15, 2021 Douglas Karr
Takagovera zvinyorwa zvishoma nezvekukosha kweruvara maererano nerudzi. Kune webhusaiti, ecommerce saiti, kana nharembozha kana webhu application, zvakangokoshawo. Ruvara rune zvarunoita: Maonero ekutanga emhando uye kukosha kwaro - semuenzaniso, zvinhu zveumbozha zvinowanzo shandisa zvitema, zvitsvuku zvinoreva kufara, nezvimwewo. Sarudzo dzekutenga - kuvimba kwemhando kunogona kutsanangurwa nekusiyana kweruvara. Zvirongwa zvemavara zvakapfava zvinogona
Analytics uye Testing Sponsor